बाम एकता बहस : 'सात बुँदेमा टेकेर सबै समस्याको समाधान गरिदैछ ! - Headline Nepal - Online News Portal from Nepal | Latest Nepal News from politics, sports, entertainment, society, world, technology, opinion, interview, Nepali movies, fashion, life style, tourism, international news, national news, economy, science, music, live news events, live sports events
बाम एकता बहस : ‘सात बुँदेमा टेकेर सबै समस्याको समाधान गरिदैछ !
Posted by Milap Subedi | २२ फाल्गुन २०७४, मंगलवार १३:२३ |
अग्नि सापकोटा, नेता माओवादी केन्द्र
नेकपा एमाले र माओवादी केन्द्रबीच चैत्रको पहिलो साताभित्र सूत्रबद्ध एकता हुने नेता अग्नि सापकोटाले बताएका छन । माओवादी केन्द्रका नेता सापकोटाले कार्यदल र त्यसअन्तर्गत बनेका विभिन्न उपसमितिले यतिबेला युद्धस्तरमा काम गरिरहेको जानकारी नेता सापकोटाले दिए । कार्यदलको म्याडेड आगामी शुक्रबार सकिने र त्यसपछि बाँकी कुरा मिलाएर चैतको पहिलो साताभित्रै पार्टी एकताको औपचारिक घोषणा हुने नेता सापकोटाले बताए । उनै नेता सापकोटासंग राज ढुंगानाले गरेको कुराकानी ।
० पार्टी एकताको प्रक्रिया के हुँदैछ ?
– होइन, कार्यदलको बैठक बसिरहेको छ, विभिन्न उपसमितिहरु बनाइएको छ, ती उपसमितिहरुले काम गरिरहेका छन् । प्रतिवेदन लेख्ने जिम्मा पनि दिइएको छ । संगठनात्मक विधान तयार समिति र संरचनासम्बन्धी कार्यदलले काम गरिरहेको छ । कार्यदललाई १५ दिनको म्याडेड दिइएको छ, त्यो समयसीमा २५ गते पुग्छ । त्यसबेलासम्म दुवै कार्यदलले प्रतिवेदन पेस गरिसक्छन् । मलाई लाग्छ, चैतको पहिलो साता सूत्रबद्ध एकता हुन्छ ।
० कार्यदलले तपाईले भनेको जस्तो कस्ता ठोस निर्णय गर्दैछ ?
– कार्यदलले निर्णय गर्ने होइन, प्रतिवेदन तयार गर्नेका लागि उपसमिति गठन गरेको छ । कार्यदलको गाइडलाइन भनेको ७ बुँदे सहमति हो । यही ७ बुँदे सहमतिमा टेकेर प्रतिवेदन लेखन, संगठनात्मक संरचना, विधान तयार गर्ने काम हुन्छ । सबैलाई वहसमा लैजाने ७ बुँदेमा भनिएको छ । बहुदलीय जनवाद, माक्र्सवाद, लनिनवाद, २१ औं शताब्दीको जनवादलाई पनि बहसमा लैजानुपर्छ ।
० जनजीविकाको सवालमा पनि कार्यदलले छलफल गर्दैछ ?
– पार्टीले नै सरकारमा पठाउने हो, पार्टीले पहिला विचार, सिद्धान्त, राजनीति, रणनीति, कार्यनीति, योजना तय गर्छ । त्यसकारण पार्टीको नीति कार्यक्रमअनुसार सरकार चल्ने हो । दुईवटैं नेताले अध्यक्षता पालैपालो गर्ने भन्ने टुंगो लागेको छ । पार्टीको मार्गनिर्देशक सिद्धान्त वा जनजीविकाको सवाललगायतका कुरा पार्टीले निश्चित गरेको विषयमा संलेषण गरिन्छ ।
० कार्यदलमा छलफल चाहिँ सकिएको हो ?
– कार्यदलमा आधारभूत कुरामा सहमति भएको छ । कार्यदलको उपसमितिले प्रतिवेदन लेख्दैछ । प्रतिवेदन लेखिसकेपछि फेरि बैठक बस्छ । कार्यदलमा एकरुपता आइसकेपछि पार्टी एकता संयोजन समितिमा पठाउँछ । त्यसपछि त्यसले अन्तिम रुप पाउँछ ।
० कार्यसमिति ठूलो बन्छ भन्ने कुराहरु आईरहेका छन खास के हो ?
– एकताको विशिष्ठ स्थिति भएको हुनाले कार्यसमितिको आकार केही ठूलो हुन्छ । त्यसमा धेरै कटौती र छाँटकाँट हुन्छ । जति विशाल पार्टी बन्दैछ, त्यसको तुलनामा कार्यसमिति चुस्त दुरुस्त हुन्छ ।
Previousपाकिस्तानी प्रधानमन्त्री अब्बासी स्वदेश फर्किए
Next‘अहिले प्रतिपक्षी आवश्यकता छैन, कांग्रेसपनि सरकारमा आऊ’ : मन्त्री पण्डित
जुम्ला डायरी : खलंगामा डा केसीका तीन साता, आजका पत्रपत्रिकाले छापेका मुख्य समाचारहरु यस्ता छन्
५ श्रावण २०७५, शनिबार ०८:१८
प्रतिनिधिसभाको समानुपातिक नतिजा आज सार्वजनिक गरिने
२५ माघ २०७४, बिहीबार ०९:०७
२३ मंसिर २०७५, आईतवार १२:३९
सडक सञ्जालसँग नजोडिएको अपि हिमाल जलविद्युत्को केन्द्र
३ मंसिर २०७५, सोमबार १५:०२